ပြည့်တန်ဆာနှင့် ၀ိပဿနာ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ပြည့်တန်ဆာနှင့် ၀ိပဿနာ
ကာလအနေနဲ့ပြောရင် မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူနေတဲ့ ကာလပါ။ ပြည်က ဝေသာလီပြည်မှာပါ။အဲဒီကာလ အဲဒီဝေသာလီပြည်မှာပဲ “မ၀ိမလာ” လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀ိမလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်က အညစ်အကြေး ကင်းစင်သူ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူပါ။
ဒါက တင်စားထားတဲ့ ရုဠီ နာမည်ပါ။ တကယ့်အရှိ အနွတ္ထအမည် မဟုတ်ပါဘူး။၀ိမလာဟာ ဝေသာလီပြည်မှာ အလှဆုံးစာရင်းဝင် တစ်ယောက်ပါ။
၀ိမလာဟာ ဝေသာလီပြည်သားတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာလည်း” ၀ိမလာ ၊၀ိမလာ ” ဆိုပြီးရေပန်းစားနေပါတယ်။ ၀ိမလာရဲ့ဆီကို သူဌေးသူကြွယ်တွေလောက်ပဲ
” နှမ ၀ိမလာ …… သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စက်ဆုပ် ရွံရှာဖွယ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ အပုပ်နံ့တွေနဲ့လည်းနံစော်နေတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။သင့်နှမဟာ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချင်းချင်း တပ်မက်နေတယ် ”
၀ိမလာက ” အရှင်ဘုရား …. တပည့်တော်ကို ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဥပါသိကာမအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုပါဘုရား “လို့ လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ ဝိမလာဟာ အိမ်ရောက်တော့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်
” လူ့ဘ၀ကို ရရှိဖို့ရာလည်း သိပ်ပြီးခဲယဉ်းတယ်။ အသက်ရှင်နေဖို့လည်း ခဲယဉ်းတယ်။တရားတော်ကို နာကြားခွင့်ရဖို့လည်း ခဲယဉ်းတယ်။ မြတ်စွာဘုရား သာသနာနဲ့ တွေ့ကြုံဖို့လည်းခဲယဉ်းတယ်။ ငါဟာ ရခဲတဲ့ ခဲယဉ်းတဲ့ တရားလေးပါးကို ရနေတယ်။ ရခဲခြင်းတရားလေးပါးကို ရနေခိုက်မှာ
အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် မျှော်လင့်တဲ့ ၊ ရစေချင်တဲ့ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရအောင်ရှာမှပဲ ”
ပြီးတော့ ” ငါ ဒီအတိုင်းထိုင်နေလို့ကတော့ အရဟတ္တဖိုလ်က သူ့အလိုလို ငါ့ဆီရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။တရားအားထုတ်မှပဲ။ တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း င့ါမှာ လောကီအတွက် ဘာမှငဲ့စရာမရှိတော့
ဘိက္ခုနီဝတ်ပြီး တရားအားထုတ်တာက အကောင်းဆုံးပဲ ” ဆိုပြီး ဘိက္ခုနီမ ၀တ်လိုက်ပါတယ်။
ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာသွားပြီး တရားအားထုတ်လိုက်တာ “အရဟတ္တဖိုလ်” ရသွားပါတော့တယ်။ ဒီတော့ တကယ့်
အပြစ်ဆိုလို့ “ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ” ရဲ့ ” မနက်ဖြန်များကို ဖြတ်သန်းနေသောစိတ်ကူးများ “စာအုပ်ထဲက ပုံဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရပါတယ်။
တွေက ” ပြည့်တန်ဆာမကို ကျောက်ခဲနဲ့ ပစ်ပေါက်အပြစ်ပေးရမယ်လို့ မောရှေ (MOSES) ကအမိန့်ချခဲ့ကြောင်း၊ ဒီကိစ္စမှာ သင်ကော ဘယ်လိုအမိန့်ချမလဲ” လို့ ဂျီးဇက်ကို ၀ိုင်းမေးကြပါတယ်။
ဂျီးဇက်ဟာ သူတို့ကို မော့မကြည့်ဘဲ သူ့လက်ချောင်းနဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာ စာရေးနေပါတယ်တဲ့။ ဂျီးဇက်ဆီကအဖြေစကားမရမချင်း ဒီလူတွေက မေးနေကြပါတယ်။ဒီတော့ ဂျီးဇက်က သူတို့ကို မော့ကြည့်ပြီးတော့ ” သင်တို့အထဲက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ ရှေးဦးစွာပဲ ဒီအမျိုးသမီးကို ခဲနဲ့ပေါက် “လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးအပြစ်အကြောင်း စဉ်းစားမိတိုင်း ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ ပြောပြတဲ့ ပုံဝတ္ထုလေးကို သတိရမြဲပါ။ ဒီပုံဝတ္ထုလေးက ဂျာနယ်မှာ ပါလာကတည်းက စွဲခဲ့တဲ့ ပုံဝတ္ထုလေးပါ။ဟိုတလောလေးကပဲ သတင်းတစ်ခု ရောက်လာပါတယ်။ ၀ိမလာတို့လို အမျိုးသမီးတွေကို အမှတ်-၁၈၊နတ်မောက်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဗဟန်းမှာရှိတဲ့ လုမှု ၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနမှာ ပြုပြင်စောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်တဲ့။ ဆွမ်းဒါနပြုမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်နေ့တာလုံးမှလေးသောင်းပဲကျပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်နိုင်ရာ အရုဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့လယ်ဆွမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲကျွေးရင်လည်း ရပါတယ်တဲ့။
သူတို့လေးတွေဟာ တကယ့် ပထမအရွယ်လေးတွေပါ။ ဒီပထမအရွယ်လေးတွေမှာ ဘ၀လမ်းကြောင်းမှားနေတာဟာ သိတဲ့လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သံသရာမှာ ဆွေမျိုးမတော်ခဲ့သူဆိုတာ ရှိကိုမရှိပါဘူး။
အမေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစ်မပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညီမပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး ဇနီးမယားပဲ ဖြစ်ဖြစ် တော်ခဲ့ကြမှာပါ။ယောဆရာတော်ဘုရား မကြာခဏဟောသလို “ဘ၀တွေဝေးသွားလို့ တစိမ်းတွေ ဖြစ်သွားကြတာပါ။ “အားလုံးဟာ ဆွေမျိုးတွေချည်းပါပဲ။
တကယ်တော့ သူတို့ဟာ ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်သွားရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ကွယ်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိနေကြမှာပါ။ ပြီးတော့ လူတွေရဲ့ အကြင်နာကို မရတော့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရလည်း သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မတူဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ တစ်ဖက်သားကိုကြည်တဲ့အခါ မယုံတဲ့စိတ်၊ သံသယဖြစ်တဲ့စိတ်၊နာကြည်းတဲ့စိတ်၊အလိုမကျတဲ့စိတ်တွေကလည်း လွှမ်းမိုးနေမှာပါ။
ပြီးတော့ တရားလည်း ဟောချင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ၀ိပဿနာတရား အဓိကထားဟောခဲ့ချင်ပါတယ်။ ထိုင်မှတ် မှတ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမှတ်ရတယ်။ စင်္ကြကြွတဲ့အခါ ဘယ်လိုကြွရတယ်။ အိပ်ရာထတဲ့အခါ၊ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ၊ ထမင်းစားတဲ့အခါ၊အောက်ထစ်ဆုံး ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်တဲ့အခါ ….
– [အရှင်ရာဇိန္ဒ ( ရဝေနွယ်-အင်းမ)]
ကျမ်းကိုး – ထေရီအဋ္ဌကထာ ၊ ၀ိမလာထေရီဝတ္ထု ။